Somali - 01. Conversation - Booklet 3: Sida loo sharaxoIn Kitaabka Quduuska Ah Lama jabin | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 3 Bible not Corrupted
La sheekaysiga Muslimiinta ku saabsan Masiixa
Muslimiin badan ayaa ka walaacsan oo sheeganaya in Kitaabka Quduuska ah la baddalay oo la been abuuray. Qaarkood waxay aaminsan yihiin in Masiixiyiintu ay si fiican u abaabulaan oo u shaqeeyaan, iyo in sharciyadoodu ay yihiin kaliya. Laakiin waxay sidoo kale tixgeliyaan kuwa iyaga ka mid ah, oo ka cabsanaya Ilaah, iyagoo riyooyin ku jira daruur-cuckoo-land, iyaga oo ah masiixiyiin noocan oo kale ah waxay tixgeliyaan Tawreed, Sabuurrada iyo goskupels inay noqdaan buugaag lagu kalsoonaan karo. Taas ayaa laga yaabaa inay dhab ahaantii hore u ahayd, Muslimiintani waxay yiraahdaan, laakiin warkooda hadda waa kuwo khaldan. Dhammaan Masiixiyiintu waxay u yihiin dhibbanayaal qalad weyn, oo rumaysan in sheekooyinka caanka ah.
Halkee miyuu shaki ka qabaa Muslimiinta 66 ka mida Kitaabka Qudduuska ah? Maxay yihiin doodaha ay ku muujinayaan in ay hoosta ka xariiqeen eedeymaha ku saabsan musuqmaasuqa Kitaabka Qudduuska ah?
Jawaabta su'aalahan waxaa laga heli karaa tobanka aayadood ee Quraanka. Waxay ka dhigan yihiin aasaaska udub-dhexaadka muslimiinta ee Kitaabka Qudduuska ah. Odeyada Yuhuudda ee Medina waxaa lagu eedeeyay in ay sino galeen. Yuhuuddu ma aysan rabin inay u sheegaan Muslimiinta aayaadka ku saabsan ciqaabta sinaanta sinaanta Tawxiidka si ay uga badbaadiyaan waayeelkooda dhagxaan. Haddaba, marar badan oo Quraanka ah, Muhammad ayaa Ilaah ka dhigay Yuhuudda kuwaas oo aan dib u soo celinaynin qarsoodiga iyo amarrada Muslimiinta:
Ha iibin Aayaadahayga qiimo hoose. (Sura Al-Baqarah 2:41)
Do not clothe justice with injustice and do not hide jus­tice, since you know it. (Sura al-Baqara 2:42)
Ha dhex gelin caddaaladda caddaalad darrada ah hana qarin juska, maadaama aad ogtahay. (Sura Al-Baqara 2:42)
Qaarkood Qaar waxaa u Yeelay Amarka Eebe, Ciddiise Daasta leh (Quraanka) ka yimid Ogow waxay Dhaheen wuu ka tagay. (Sura Al-Baqara 2:75)
Hoog waxaa leh kuwa buugga ku qora gacmahooda oo dabadeedna sheegaan: "Tanu waa Alle!" iibinta qiimo jaban. (Sura Al-Baqara 2:79)
Dhab ahaanbaan ku Xambaaray Xaqdarro, Xaalkooda Cidduu Dhumiyo. (Al-Baqarah 2:146)
Oh dadka buugga! Bal maxaad ula macaamilootaa si laydiinka hoosaysiiso oo aad u garsoorid soo muuqataa? (Sura Al-Imran 3:71)
Dheh mooyee oo ka mid ah Haygulana Hadal way ka Tukadiyaan Quraanka wayna u Dhawyihiin inay ku Boodaan siduu uga yeedhayna Kitaab Eebe oo kalewaxay ka Cabsan. (Sura Al-Imran 3:78)
Qaar ka mid ah Yuhuuddu waxay u guuraan xarfaha ereyada meelahooda (si ay u sameeyaan dareen ka duwan). (Sura al-Nisa 4:46)
Tan iyo markii ay jebiyeen axdigooda, annaguna (Eebbe) waan habaaray oo qalbigoodii adkeeyey, sidaas darteed way ka wareegeen waraaqaha meelahooda oo way iloobeen qayb ka mid ah wixii loo dhigay inay xusuustaan. (Sura al-Ma'ida 5:13)
Kuwa Dheh waxaan nahay Nabadgalyo (Dhawraad) oo ka Dhawrsada Allah waxaad Mudane ku tahay Liibaantaane. Laakiin ka dibna ay ka maqnayd qayb ka mid ah waxaa loo sameeyey si loo xusuusto. (Sura al-Ma'ida 5,14)
Haddii aad falanqaynayso 10 qaybood oo ah aayadaha Quraanka ee luqada carabiga waxaad ka heli kartaa sideed xaqiiqo oo taariikheed:
Ma aha "dhammaantood" Yuhuudda, laakiin koox yar oo iyaga ka mid ah, waxay isku dayeen inay hoggaamiyaan Maqaalka (Sura al-Baqara 2:75,146; Al Imran 3:78).
Waxay ahaayeen dad si toos ah u hogaaminaya (Sura al-Nisa 4:46), laakiin waxay dabooleen qaybo ka mid ah sharcigooda iyagoo leh erayo madhan si ay u qariyaan caddaaladda (Sura al-Baqara 2:42; Al Imran 3:71).
Aafaahin kama aysan tarjumin qoraalada kitaabiga ah ee Muhamusmarka ah, umana sheegin wax kasta oo buugiisa ka mid ah, haddii uusan marka hore iibin dukaamadiisa (Sura al-Baqara 2:41, 79).
Waxay ka qariyeen amarro ka yimid isaga, gaar ahaan kuwa iyagu waxyeello u geysan lahaa xaalado gaar ah oo ku lug leh Muxammad iyo Muslimiinta (Sura al-Baqara 2:42,146, Al Imran 3:71).
Waxay badasheen shaqooyinka ama qodobbada diacritical ee qaar ka mid ah ereyada qaarkood taas oo bedeleysa macnaha ereyadaas (Sura al-Baqara 2:75, al-Nisa 4:46; al-Maida 513).
Waxay qalloociyeen carabkoodii markii ay qoreen qoraallada Tawreedka si aan cidna u fahmin waxa ay dhab ahaantii leeyihiin (Sura Al 'Imran 3:78).
Waxa ay buugaagta quduuska ah ku soo qoraan gacmahooda si ay ugu toosiyaan Ilaah (Sura al-Baqara 2:79).
Waxay illowday dhowr aayadood oo ka mid ah Qorniinkooda, in ay muujinayaan astaamaha, waa inay ku hayaan xusuusta (Sura al-Ma'ida 5:13). Muxammad wuxuu sidoo kale ku eedeeyey Masiixiyiinta in ay gaaloobaan Ilaah iyo muujintiisa (Sura al-Ma'ida 5:13).
Laga soo bilaabo eedeymaha Quraanka ah waxaad arki kartaa in tiro yar oo Yuhuud ah oo ku yaala Madiina ay dhibaato ka haysato Muhammad. Inta badan dadka Yuhuudda ah laguma eedeeyo Quraanka kaba-marintan. Ma ay been-abuuraan mana qancin buuggooda quduuska ah. Yuhuudda meel kasta waxay heystaan xaqiiqda dhabta ah ee Tawreed ilaa maanta.
Quraanka dhexdiisa sidoo kale ma jiro xusuusin ah in kitaabkii Tawfiiqda oo dhan la beddelay bilowgii ilaa dhammaadkii. Muxammad wuxuu ku andacooday in kelmado kali ah oo keliya la qariyey, si khaldan loo adeegsaday ama lagu dhejiyay shaqalooyin kala duwan. Xumnaha Tawreed ee guud ahaan laguma waydiin meel kasta oo Quraanka ah!
Si kastaba ha ahaatee, Yuhuudda, iyo sidoo kale Masiixiyiin, ma aysan awoodin in ay dib u eegaan marinnada dheer ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin waxay soo bandhigeen ra'yigooda, khibradahooda ama tarjumaadaha qoraallada kitaabiga ah. Muslimiinta barashada ereyga shaaca ka qaaday wadnaha waa caddaynta jacaylka rumaystaha ee Ilaah iyo muujintiisa. Waxay ku seegeen jacaylkan noocan oo kale ah ee ku saabsan Yuhuudda iyo Masiixiyiinta. Muxammad wuxuu doonayay in uu maqlo qoraallada saxda ah ee Muujintii soo noqnoqonaysay xasuusta, ma uusan rabin inuu barto fikradda shakhsiyaadka ku saabsan.
Falanqaynta gaaban ee aayaadka Quraanka ee ku xusan falanqayntu waxay muujinaysaa in Muslimiinta laga shakisan yahay iyada oo aan sababtu u dhicin musuqmaasuqa. Intaa waxaa dheer, Quraanka marnaba ma sheegin meel kasta oo Injiilka lagu khaldan yahay ama loo badalay, sababtoo ah Muxammad loo ixtiraamo oo uu ogaa kalsoonidooda iyo jacaylka runta ah.
AhKa dib markii dhowr Yuhuud iyo Carabi ah ay aqbaleen Islaamka fikradda ayaa ka dhex abuurtay Muxammad, oo naftiisa isugu yeeray shaabadda nebiyada oo dhan, waa in lagu sii sheegaa erayada Kitaabka Quduuska ah. Muhammad ha dhehin 'Quraanku wuxuu ku leeyahay Quraanka in khayrka la yiraahdo Ahmad baa ku iman lahaa isaga (Sura al-Saff 61:6).
Tan iyo markaas, Muslimiintu waxay ka shakiyaan in Yuhuudda iyo Masiixiyiintu ay tirtireen magaca Muxammad ama macnohooda Ahmad ka yimid buugaagta quduuska ah.
Waqtiga ugu muhiimsan ee baaritaanka jirdhiska ah ee waxsii sheegyada ee Kitaabka Quduuska ah bilaabay, si ay u arkaan haddii ay u maleynayaan in ay imanayaan soo socda ee Muhammad. Xeeladaha tirakoobka ah iyo qoraallada tiradoodu waxay ku xiran yihiin aaminsanaanta Islaamka in Mucjiso ay tahay in lagu xusay Kitaabka Quduuska ah. Waxay badanaa sheegaan Sharciga Kunoqoshadiisa 18:15,18. Markaasaa Muuse wuxuu ku yidhi, Rabbiga Ilaaha ahu wuxuu walaalihiinna dhexdooda idiinka kicin doonaa nebi anoo kale ah. Dhageyso isaga! Muslimiintu waxay ku andacoonayaan in ay si xushmad leh u sheegaan: "Tani nebiga ballan qaaday waa inuu ahaado Muhammad." Laakiin iyagu ma ayan ogayn in nebi nebigu ka yimid dadka reer binu Israa'iil. Qof kasta oo weyddiiya haddii ay jeclaan lahaayeen in ay qirtaan in Muhammeemku uu yahay inuu yahay mid Israeli ah ama Yuhuudi ah ay maqli lahaayeen cadho "Maya!"
Injiilka waxay marar badan soo xiganayaan caannaanta caanka ah ee Ciise sameeyey: La taliyaha, Ruuxa Quduuska ah, oo Aabbuhu ku soo diri doono magacayga, wuxuu idin bari doonaa wax walba (Yooxanaa 14:16,17,26). Cilmi-baadhayaasha Muslimiinta ayaa aaminsan in lataliyaha la ballan-qaaday inuu ahaado Muhammad! Waxay baaraan erayga Giriigga ah ee parakletos (la taliyaha), si dhakhso ah u beddelay shaqadiisii iyo parakletos bedelay perikletos, taas oo macneheedu yahay "midka la ammaanay" (Muhammad). Marka ay ku ashtakeeyaan Kiristaanka oo is beddelay magaca Muxammad ee parakletos, waxaan tusi karnaa inay ahaayeen kuwa bedelay shaqaalihii! Intaas waxaa dheer, markaad weydiisid balan-qaadayaashan haddii ay isku raacaan in Muxammad loo soo diray "addoonkiisii" sidii addoonkiisa, waxaad maqli doontaa diidmo naxdin leh. (Yooxanaa 17:7 waa qoran tahay in Ciise uu soo diray la taliyaha.) Su'aashaas waxay khasaari kartaa sheegashada Islaamka.
Marka culimada Islaamka iyo mufasiriinta Quraanka Quraanka kariimka ah la barbar dhigo Qur'aanka qarniyadii kaddib markii uu dhintay dhimashadii Muxammad, waxay ku ogaadeen in aan hal jumlad oo labadii buug ee isbarbardhiga ah iyo muuqaalba la mid ah. Dareemidda sii kordhaysa ee ka imanaysa xaqiiqadani waxay ku beenisay go'aamo sharciyeed oo hufan. Waxay go'aansadeen in dhammaan khilaafaadka u dhexeeya Kitaabka Qudduuska ah iyo Quraanka waa inay tilmaamaan musuqmaasuqa Kitaabka Quduuska ah. Qaabkan Quraanka waxa loo sameeyey heerka cabbirka iyo garsooraha Kitaabka Qudduuska ah. Asal ahaan muslimiintu waxay rumaysan yihiin in labadan buug ay ka soo jeedaan buugga hore ee jannada dhexdiisa waxaana lagu gudbiyey sheeko gaaban. Farqiga aan kala sooc lahayn ee ka dhexeeya saddexda buug ee, si kastaba ha ahaatee, waxay caddaynayaan ra'yigooda ku saabsan jaahilnimada Tawreed iyo Injiilka. Waa in aan aqoonsanno in ku saleysan gabagabadani Islaamku waxa uu caddaynayaa inuu yahay ruux ka soo horjeeda kitaabiga ah oo haysta inta badan Muslimiinta ku jira xabis wadareed.
Weerarka afraad ee Islaamiga ah ee ka dhanka ah Kitaabka Quduuska ah wuxuu ka yimaadaa koox ka kooban Mr Deedat, oo ah Muslim Hindi ah oo Koonfurta Afrika ah. Waxa uu soo ururiyay tiro badan oo ka mid ah doodaha aan Quraanka ahayn ee ka soo jeeda mujaahidiinta yurubiyaanka ah, isbahaysiga, maadadlayaasha iyo xagjirnimada dimuqraadiyada, oo u muuqda inay cadeeyeen khaladaadka Kitaabka Qudduuska ah. Sheegashooyinka la-dagaallanka bini-aadamku waxa ay ka hor imaanayaan hadalladii Qur'aanka. Inkasta oo uu doodiisa la dhisay oo lagu dhajiyay shool, haddana dhaqaale ahaan waxaa taageeray dhawr dowladood oo saliideed oo saliideed ah, sababtoo ah wuxuu awood u lahaa in uu ruxo miisaaniyadda Masiixiyiinta ah iyo Muslimiinta adduunka oo idil.
Mucjisooyinka kale ee uu Mr Deedat sheeganayo in Masiixu uusan runta sheegin marka uu wax sii sheegayo: sida Jonah saddex maalmood iyo saddex habeenkii caloosha kalluunka, sidaas darteed Wiilka Aadanku wuxuu noqonayaa saddex maalmood iyo saddex habeen oo qabrigiisa (Matayos 12:40; Mark 8:11-12; Luukos 11:29-32). Dhibaato, Mr Deedat wuxuu tilmaamayaa xaqiiqda ah in Masiixa uu ku jiro qabrigiisa oo kaliya laga bilaabo galabnimadii jimcaha, ka hor qorraxdu, ilaa subaxa Axadda, ka hor waaberiga. Wuxuu faafiyaa xaqiiqda ah in Ciise uu ahaa hal maalin iyo badh iyo laba habeen oo qabrigiisa, laakiin marnaba saddex maalmood oo buuxda iyo saddex habeen oo buuxda! Laga soo bilaabo xaqiiqda ah waxa uu soo jiidanayaa gabagabadii in Ciise uusan ahaa nabi aaminsan!
Masiixiyiin badani ma yaqaanaan sida looga jawaabo arimaha noocan oo kale ah ee Mr Deedat's iyo ka tagto madaxyada xayawaanka. Laakiin kiiskan ayaan ka jawaabi karnaa, sida laga soo xigtay dhaqanka Yuhuudda, wax kasta oo dhacay waqtigii maalin kasta ayaa la qabtay maalintii oo dhan. Tan iyo markii Ciise lagu aasay jimce, jimcihii oo dhan waa maalinta uu geeriyooday. Sidoo kale sarakicistiisa ayaa si rasmi ah u dhacay maalintii oo dhan maalinta isbuuca.
Iyadoo xirfadahan noocan oo kale ah Mr Deedat wuxuu isku dayayaa inuu su'aal ka keeno iskutallaabta iyo sarakicidda Masiixa iyo injiilka. Waxa uu soo ururiyay hadalo badan oo muhiim ah oo ku saabsan qoraalka Kitaabka Qudduuska ah, oo ay ku qoran yihiin kuwa diinta fiqi ahaaneed, oo isku dayaya in ay caddeeyaan caawimaadyada weedhahan oo aan xitaa khabiirada Masiixiyiinta ah ay aaminsan yihiin bani-aadmiga Kitaabka Qudduuska ah. Goobaha sunta ah ee cadowga Masiixa waxaa lagu daabacaa oo loo qaybiyaa malaayiin Afri, Asia iyo qaar kale. Ardaydiisu waxay u shaqeyn jireen si toos ah laba luqadood oo ku qoran luqado badan oo leh saameyn aan la taaban karo.
Waa in aynaan la yaabin oo kaliya maahan Masiixiyiin, laakiin al-Muslimiin ayaa la ruxay kalsoonidii ay ka qabeen BIA. Qof kasta oo isku daya inuu sharaxo badbaadada Masiixa ee mujaahidiinta Mu'miniintu waa in uu marka hore helaa siyaabo lagu dhejiyo Kitaabka Quduuska ah, haddii kale dadaal kasta oo ay noqon karto mid aan micne lahayn. Gabaygan soo socda by Nikolaus Ludwig, Earl of Zin¬zendorf (1700-1760), sidoo kale run ahaantii ka shaqeeya adeegayaasha ah ee Muslimiinta:
Rabbiyow, ilaali eraygaaga,
oo ah hadiyaddaada, dahabkaaga,waayo,
waxaan ka doorbidaa hantidaiyo hanti ugu weyn.
Haddii eraygaaga uusan mar dambe shaqayn,
Maxay tahay aasaaska iimaanka?
Ma doonayo inaan shaqeeyo kun kun
(Jarmal Protestant Hymnal, EKG 436)
Haddii aad isku daydo inaad sharaxdo runta Kitaabka Quduuska ah ee Muslinka ah, waxaad ka heli doontaa shan ilo oo xeeladeysan oo buuxa doodaha aad ujeeda:
Markhaati ka ah Axdiga Hore ee runta ah ee ereyga dib loo soo celiyay ee Ilaah;
Hadalka Ciise Masiix ee ku saabsan xaqiiqada Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub;
Ilaha maqalka ee kala duwan ayaa xaqiijin kara runta Kitaabka Qudduuska ah;
Aayadaha wanaagsan ee Qur'aanka ee kusaabsan Tawreed aan macquul ahayn iyo Injiilka asalka ah;
Waayo-aragnimadeena shakhsi ahaaneed ee awoodda laga soo qaado ereyga Ilaah.
Qof kasta oo doonaya in uu sharaxo muslinka ah in Ilaahay eego ereygiisa waa in uu xasuustaa Aayadaha soo socda oo uu la wadaago saaxiibkiisa Muslimiinta:
● Yeremyaah 1:11-12: Oo haddana Eraygii Rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh, Maxaad aragtaa? Yeremyaahow, bal maxaad aragtaa? Oo anna waxaan idhi, Waxaan arkaa dhirta midhaha badeed. Markaasaa Rabbigu igu yidhi, Si wanaagsan baad u aragtay, waayo, waxaan u fiirsadaa in erayadaydu dhammaato.
Nebi nebiga waxaa la siiyay ballan, waxa loo ballan qaaday saxnaanta iyo xaqiiqada ereyga Ilaah, maxaa yeelay Rabbiga qudhiisu wuxuu ilaaliyaa ereygiisa. Qofka Alle joogaa marnaba ha seexanin, ama ha noqotee, laakiin wuxuu ilaaliyaa dadkiisa iyo inuu ka hor istaago erayadiisa. Ujeedada ereyga Ilaah ma aha erayga laftiisa, laakiin sidoo kale ficilkiisa iyo saameyntiisa. Rabbigu wuu dhawri doonaa inuu erayadiisu ogaado. Qofna ma hor istaagi karo Rabbi awoodda u leh inuu sameeyo waxa uu leeyahay.
● In Sharciga Kunoqoshadiisa 4:2 waxaannu akhrinay ereyga Muuse: Ha ku darsamin waxa ku saabsan amarradaada, oo ha ka tegin, laakiinse waxaad xajisaan Rabbiga Ilaahiinna ah anoo addoonkaaga ah.
Yaa ku kalsoonaan lahaa, si qarsoodi ah ama qalad ah, u bedelaya ballanqaadyada iyo ballanqaadka Eebbe, wuxuu ku darayaa fikradiisa u gaarka ah ama ka tirtirtaa xayawaanada uusan jeclayn? Rabbiga qudhiisu wuxuu amar ku bixiyaa Muuse si uu u ilaaliyo ereygiisa oo aan la xakamaynin, si uu u barto qalbigiisa iyo inuu u dhaqmo si waafaqsan nolol maalmeedka. Kitaabka Quduuska ah wuxuu difaacaa runta laftiisa. Islaamku waa eray nabarku waa erayga tooska ah ee Alle! Ma jiro farqi u dhexeeya labada. Eebana waa adkaade falsan. Muslimiintu inta badan way fahmaan Tawreed inay noqdaan Axdiga Hore oo dhan.
● Maahmaahyadii 30:5-6 waxaan akhrinaynaa: Eray kasta oo Ilaah ah waa mid aan waxba tarayn; Oo isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isaga isku halleeya oo dhan. Erayadiisa waxba ha ku darin, Waaba intaas oo uu ku canaantaa.
Sida dahab saafi ah loo ogaado, ayaa ereygii Rabbiga lagu dhex sameeyey, oo wuxuu ku dhammaaday hadalkii quduuska ahaa ee Rabbiga ciidammada. Sidaa darteed waa wax aan fiicnayn, daahir iyo weligii. Rabbigu wuxuu ina siiyaa "hubka buuxa ee Ilaah" (Efesos 6:10-20) oo eraygiisa. Kii aan ereyga Rabbiga ku dhex jiraa, ma uu helin xoogga Ruuxa. Isaga oo soo bandhigaya falsafadiisa shakhsiyeed, cilmi nafsiga, sayniska dabiiciga ah ama runtii loo yaqaano diimaha kale iyo dhaqamada kale ee la muujiyay, ayaa noqon doona mid been abuur ah oo ciqaabi kara Ilaah. "Nacasnimada ereyga" ayaa ka xoog badan xigmadda dunida (1 Korintos 1:18-29).
● Sabuurradii 33:4 Ereygii Rabbiguna waa xaq oo run ah; Isagu waa aamin.
Qoraallada Kitaabka Qudduuska ahi waxay ka kooban yihiin xaqiiqo dhab ah, xitaa haddii Muslimiin iyo Masiixiyiin xor ah ay diidaan xaqiiqda. Tilmaanta runta ah ee ereyga Ilaah ayaa ku jirta waxa Ilaah samaynayo. Ereygiisu maahan runta keliya, laakiin waxay samayn doontaa waxa uu leeyahay. 333 ballanqaadka Axdigii Hore oo ku dhammaaday Axdiga Cusub, xaqiiqda Axdiga Hore si sax ah u caddee. Dunida oo dhan ma jirto buug uu ku jiro xaq-u-helid runta ah, sida Kitaabka Quduuska ah. Rabbigu wuxuu sameeyaa waxa uu leeyahay! Qur'aanku wuxuu barayaa wax walba oo qadarin ah. Ballan-qaadka ku aadan ballan qaadyada Axdiga Hore ee Imtixaanka Cusub waa indhaha furaha u ah Muslimiinta badan, oo ku xiran fahamkooda xag-jirnimada.
● Sabuurka 119:89 Eraygaagu, Rabbiyow, weligiis waara; waxay ku taagan tahay samada (Ishacyaah 40:8; 1 Butros 1:25).
Xadidnimada ereyga "weligeed" waxay la xiriirtaa cawaaqibka iyo ballanqaadka ballanqaadkan. Dhammaanteen waxaan ku noolnahay si kooban. Laakiin eraygii Rabbiga wuu istaago daa'in, waana mid aan la qallajin karin, xitaa marka loo eego boodhka weyn ee badhtamaha Rhine Waterfalls meel u dhow Schaffhausen, Switzerland, oo qayliya hareeraha habeen iyo maalinba. Iyadoo ereyga Eebbe daa'im ah ayaa gaaraya waqtigeena. Dhammaan qaaradaha iyo bilicda wadaxaxyadan ereyga Eebbe waa balanqaad ah in si qarsoodi ah loo xirayo. Amarradiisa, ballanqaadyadiisa iyo waxyaabihii uu ka soo maray waaya-aragnimada rumaystayaashu waxay xaqiijinayaan naxariistiisa. Qaar ka mid ah Yuhuudda iyo Muslimiintu waxay u maleynayaan in buugta asalka ah ee Ilaah oo dhan ay muujinayaan jannada dhexdeeda. Qofna ma gari karo ama beddeli karo ereygan asalka ah ee Ilaaha Qaadirka ah.
● Sabuurradii 19:7-9, waxa ku jira markhaati furka Daa'uud, sida uu u arko runta ereyga aan la beddelin ee Rabbiga ee noloshiisa:
Rabbiga sharcigiisu waa qumman yahay,
soo nooleynta nafta.Qaynuunnada Rabbigu waa aamin;
caqli garta.Qaynuunnada Rabbigu waa xaq,
iyagoo faraxsan.Amarrada Rabbiga ayaa iftiin u ah,
indhahana si iftiin leh.
Isaga oo ka fikiraya afartan hadalladahan: qummanaanta, kalsoonida, xaqiiqda iyo shucuurtu waxay ku kalsoonaan doontaa xaqiiqada Kitaabka Quduuska ah waxayna u gudbin kartaa Muslimiinta.
● Ishacyaah 55:10-11 wuxuu ku dhiiri galinayaa dhammaan addoommadii Rabbiga ee soo bandhigay eraygiisa Yuhuudda, Hindus, Buddhistayaasha, Muslimiinta, xoriyadaha iyo fanfigooda: Sida roobka iyo barafka ayaa ka soo degay samada, oo ha ku soo noqonin iyada oo aan biyo waraabin oo dhulka iyo waxa ka buuxsamaya waa kala firdhay aawadiis, oo hadhuudhkuna wuxuu u jejebin doonaa sida ubaxa cawska oo kale, oo bushimihiisana waxaad ka dhigtaa inay dhabarka ii jeediyaan. ujeedada aan u diro.
Aayadaha Rabbiga ee Kitaabka Qudduuska ah ma aha oo kaliya run iyo dhab ah, laakiin awood leh oo xoog leh. Waxay samayn doonaan wixii Rabbigu doonayo. Muslimiintu ma qiyaasaan in erayga la soo sheegay uu leeyahay awood awoodeed. Ereyga Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku dhex jiraa hal abuur, bogsashada, cafiska, raaxada iyo cusboonaysiinta awooda. Yuhuudda badankood waxay la kulmeen xaqiiqadan oo waxay sharaf ku muujiyeen Tawreed iyagoo xushmad weyn leh. In ka badan qaar ka mid ah iyaga ayaa naftooda ku bixiyay si ay u aaminsan yihiin xaqiiqada iyo budhcada buugaagta Axdiga Hore.
● Matayos 5:17-18 waxay bixisaa imtixaan cad oo tilmaamaya Ciise Masiix oo qeexaya booskiisa ee ku saabsan muujinta Axdiga Hore: Ha u maleynin inaan u imid inaan ka tirtiro Sharciga ama nebiyada; Anigu uma aan imanin inaan iyaga ka baabbi'iyo, laakiinse waxaan u oofin doonaa iyaga. Runtii waxaan idiin sheegi doonaa, ilaa Jannada iyo Dhulku baabi'iyaan, ma aha warqadda ugu yar, ee aan ugu yaraan qaloocsanayn qalin, wax kasta oo macnaheedu waa ka baxayaan Sharciga illaa iyo wax kasta oo la dhammeeyo.
Qoraalkan aasaasiga ah ee Wiilka Ilaah wuxuu ku adkeeyaa xaqiiqada Axdiga Hore. Ciise wuxuu beeninayaa in uu beddelay astaamaha hore ee cusub ama kuwa ka wanaagsan, sida Quraanka, oo isaga qudhiisu ka kooban yahay 240 Aayado oo la tirtiray aynaan ansax aheyn.
Ciise Masiix, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka hadlayaa dhammaysashada Sharciga iyo nebiyadii iyada oo la adeegsanayo waxbaristiisa, noloshiisa, miyirkiis, dhimashadiisa, sarakiciddiisa, soo bixinta Ruuxa Quduuska ah iyo soo noqoshadiisa. Rabbi Ciise ayaa sharfay, qotomiyey, oo wuxuu ku noolaa Axdiga Hore isagoo Kitaabka Qudduuska ah.
Ciise wuxuu dammaanad qaadayaa xaqiiqada dhammaan buugaagta Axdiga Hore ilaa dhammaadka caalamka, xiitaa xitaa muslimiintu waxay noqon kartaa mid aan sax ahayn, ama dhibic yar oo lumay, laakiin waa la oofin doonaa si sax ah. Baaqkan rasmiga ah ee Ciise Masiix wuxuu burin doonaa eedeymaha Muhammmad iyo kuwa raacsan.
● Matayos 24:35 waxa uu siiyaa erey kale oo Ciise Masiix ah kaas oo u dammaanad qaadaya runta iyo daa'inka ah ee Injiilka iyo dhammaan Qorniinka Axdiga Cusub: Cirka iyo dhulku waa la dhaafi doonaa, laakiin ereyadaydu marnaba ma dhammaato.
Ciise waa mid aan rajo lahayn ama niyadjab, laakiin waa xaqiiqo. Wuxuu inaga hubinayaa in dhammaan barnaamijyada aadanaha ay ku hagaajinayaan adduunka iyo in la ilaaliyo abuurka ayaa waxtar u ah, sababtoo ah samada iyo dhulkeena yar yar ayaa ka gudbi doona. Laakiinse tan iyo maalintii Rabbigu waa nool yahay, oo hadalkayguna wuu ka buuxsamaa ruuxa iyo xooggiisa, oo ugudambaystiisana garsooriddiisu ma turunturoodo. Wuxuu nagu dhiirri geliyaa rumaysadka iyo rajada marka uu ku yiraahdo: Farxadee in magacyadiina ku qoran yihiin jannada! (Lukos 10:20). Dhamaan kuwa ku dhashay mar kale eraygiisa oo helay Ruuxiisa Quduuska ah waxay ka qayb qaataan nolol weligeed ah.
● Luukos 1:1-4 wuxuu inoo muujinayaa sida taxaddar iyo xaqiiqo ah wacdiyayaashu ay hoos ugu dhigeen ereyada iyo falalka Ciise Masiix. Dhakhtarka Giriigga Luukos wuxuu ku tilmaamayaa sida uu inooga yimaado injiilkiisa: Qaar badan ayaa ku dadaalaya in ay soo saaraan xisaabin ku saabsan waxyaalihii naloogu soo minguuriyey, sida ay inooga war hayeen kuwa ugu horreeya markhaatiga indhaha iyo addoommadii ereyga. Sidaa darteed, tan iyo markii aan si taxaddar leh u baaray bilowgii hore, waxay ii muuqatay mid iigu fiican inaan kuugu qoro xisaab habboon, adiga oo ah Theochphus aad u fiican, si aad u ogaan karto hubinta waxyaabaha aad baratay.
Injiilladu hoos uma soo degin samada sida buugag dhamaystiran, maadaama qaar ka mid ah muslimiinta ay u maleynayaan Quraanka in dib loo soo celiyay. Dhakhtarka Luukos, oo ahaa dhakhtar Giriig ah, oo ku jiray Masiixa, ayaa weydiyay markhaatiyaal indho-furan oo masuuliyiin ah oo loo magacaabay rasuullada inay soo ururiyaan oo qoraan erayada Ciise. Waxaa loogu yeedhay addoommadii ereyga.
Luukos, dhakhtarka, wuxuu doonayay inuu ogaado sida Maryan oo bikrad ah u heli lahayd ilmo aan lahayn ninkeeda! Sidaa darteed wuxuu si xushmad leh uga codsaday dhacdooyinka. Waxay ahayd Maryan oo u sheegtay sida malaa'igtii Gabriel u muuqatay Sekaryaah oo ahayd mid dhalatay Yooxanaa Baabtiisaha (Luukos 1:5-24). Waxay u sheegtay isaga oo ku saabsan muuqaalka madaxa banaankeeda iyada oo la joogta Naasatan (Luukos 1:25-56) oo u sheegay faahfaahinta sheekada kirismaska (Luukos 2:1-21). Waxay sidoo kale u sheegtay isaga oo ku saabsan Ciise oo macbudka ku jira (macbudka Luukos 2:22-40) iyo ku saabsan booqashada Ciise laba iyo toban jirsaday macbudka (Luukos 2:41-52).
Dhakhtarkan Giriigga ah wuxuu soo ururiyay masasado badan iyo dib u soo celinta Ciise oo aan warka kale sheegin: Lambarka lumay (Luukos 15:1-7), wiilkii qaladka ahaa (Luukos 15:11-32), Samaritan wanaagsan (Luukos 10 : 25-37), nin hodan ah iyo Laasarrus (Luukos 16:19-31) iyo warbixintii tobanka tobnaad ee leprozane (Luukos 17:11-19). Luukos wuxuu dhegaystay masraxa Phariiska iyo cashuurqaadaha (Luukos 18:9-14), wuxuu qaatay qoraallo ku saabsan Jasus oo booqday Zakariyos (Luukos 19:1-10) iyo ilmo Rabbiga oo Yeruusaalem ka yimid ( Luukos 19:41-44). Luukos sidoo kale wuxuu ku daray sheekada Maryan iyo Martha (Luukos 10:38-42), waxa loo dhiibay magacyada gabdhaha xertiisa Ciise (Luukos 8:1-3), oo laga yaabo inay ka bartaan saddexda eray ee gaarka ah Jeux on iskutallaabta (Luukos 23:34,43,46).
Luukos wuxuu weyddiistay faahfaahin ku saabsan kulankan qotomiska ee labadii xerta ahaa ee Emmaus (Luukos 24:13-35) iyo faahfaahin kale oo ku saabsan Ciise kacay oo xertiisa naxdinta leh ka bartay Qorniinka Axdiga Hore (Luukos 24:44-49). Kaliya wuxuu soo sheegey kor u qaadista Ciise (Luukos 24:50-52, Falimaha Rasuullada 1:1-14) iyo bixinta Ruuxa Quduuska ah (Falimaha Rasuullada 2:1-47).
Luukos, dhakhtarka, ma garanayno qoraallo muhiim ah ee injiilka. Waxa uu u qoray labadiisa buug ee hal shakhsi, Theophilus, oo ahaa taliyihii Roomaanka, kaas oo noqdey Christian in Antiyokh. Rabbi kor u kacay, Ruuxiisa Quduuska ah, wuxuu u hoggaansamay Luukos "ajnabiya" si taxadar leh loo soo uruuriyo xaqiiqda taariikhiga ah isla markaana si habboon u qorto mas'uuliyadda. Injiilka wuxuu taageersan yahay, oo qoraal iyo shaabadeeyey Ruuxa Quduuska ah. Ciise qudhiisu waligiis kuma soo qorin buug inkastoo uu akhrin karo oo qori karo Cibraaniga. Laakiinse markhaatiyaalkiisana waxaa laga arkay xag Ilaah ka yimid markhaatiyaal wanaagsan.
● Yooxanaa 1:14 wuxuu ina siinayaa caawimo qaas ah markaan la hadleyno Muslimiinta: Ereyga wuxuu noqday jidh iyo dhexdeenna dhexdeenna. Waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaantii u ekayd tan Wiilka keliya ee Aabbaha, ee nimco ka yimid oo nimco ka timid.
Yooxanaa waxa uu fahmay in Ciise uusan ahayn ereyga Rabbiga oo keliya, laakiin isagu qudhiisu wuxuu ahaa Ereyga! Ma jirin wax kala duwan oo u dhexeeya erayadiisa iyo shuqulladiisa. Sidaa darteed, wuxuu ku hadhay dembi la'aan. Ereyga Eebuhu wuxuu abuuraa, bogsiiyaa, cafiyaa, raaxaysiiyaa oo cusboonaysiiyaa rumaystayaasha. In Ciise rabitaanka Ilaah iyo awooddiisa ayaa la arkay. Dhimashada ereyga Rabbiga ee Ciise wuxuu ku soo koobayaa dhammaan erayada Ilaah ee shakhsigiisa. Dhammaan ballammadu waa Haa iyo Aamiin isaga. Uma aamino "diin", laakiin "qof"! Kaliya kalsoonidoono ereyga daabacan ee Rabbiga, laakiin ugu horreyntii Ciise, qof. Isagu ma beddelo. Buug waa la been abuuri karaa oo burburin karaa. Laakiin Ciise weligiis noolaa. Waa erayga Rabbiga. Quraanku wuxuu markhaati ka yahay shan jeer. Waa inaynu u aqoonsannaa albaabkan furan ee Muslimiinta ah, isaga oo dhex maraya oo ku wacdiya Ciise sida Ereyga Rabbiga ee jidhka.
● Yooxanaa 16:13 waxa uu ku jiraa xukun raaxo leh: Laakiin markuu kan Ruuxa runta ahi yimaado, wuxuu kuu tilmaamayaa runta oo dhan.
Markuu Muslimkii hore ee Kashmiir ku akhriyay qoraalkan, ayuu ku jawaabay, "Miyaad leedahay Ruuxa runta ah?" Waxa uu sii waday fikirkiisa oo wuxuu ku yidhi, "Haddii aad heshay Ruuxa runta ah, ma been sheegi kartid. Oo hadday idinku aad bogsato, Ruuxa runta ahu wuxuu idiinku badin doonaa been si aad u xajisid qaynuunnadaada. Ruuxkani uma dulqaadan karo dareenka. "Ninka reer Kashmuun ma sugin jawaabtiisa su'aalihiisii oo wuxuu ku sii socday," Haddii Ruuxa runta ahi uu ku noolaado Masiixiyiinta, marnaba been ma sheegi karo Kitaabka Quduuska ah! Ruuxa runta ah xaqiiqdaas ma oggolaan doono."
Taasi waa asaaska dhibaatada! Muslimiintu waxay ka shakiyaan Yuhuudda iyo Kiristaanka ah ee Quduuska ah ee Quduuska ah, sababtoo ah ma jirto Runta runta ee Islaamka. Islaamka dhexdiisa, been-abuur ayaa sharci ahaan loo ogolyahay afar xaaladood: Dagaalka Quduuska ah, oo lagu heshiiyay laba Muslimiin, marka ninku uu la xiriiro haweenkiisa, iyo marka xaas ay la hadlaan ninkeeda. Xitaa dhaartii lagu dhaartay degdeg ayaa la jabin karaa (Sura al Tahir 66:1-2). Diinta Islaamka Eebe wuxuu ugu yeeraa ugu fiican dhamaanba khiyaamada khayaanada (Sura Al 'Imran 3:54; al-Nisa 4:132; al-Anfal 8:30). Yaa ka dib la yaabi lahaa in Muslimiintiisa lagu tuhunsan yahay kuwa kale inay yihiin khayaali ah sida ruuxooda Qur'aanka? Haddii aad isku daydo inaad u sharaxdo muslimka xaqiiqada Kitaabka Qudduuska ah waa in aad marka hore tukatid, in Ruuxa runta ahi uu iyaga ka dulqaado iyaga iyo sidoo kale adiguba. Xaqiiqda kale, runta, aaminnimada iyo kalsooniddu waxay ahaan doontaa woxoogaa shisheeye.
● Yooxanaa 17:17 wuxuu muujinayaa qarsoodi ah salaadda wadaadada sare ee Ciise. Halkaas ayuu ku dhawaaqay qeexitaanka cad ee macquulnimada Kitaabka Qudduuska ah qaabkeeda ugu gaaban: Eraygaagu waa run! Xukunkani wuxuu ka fog yahay wax barista diinta, wacdinta, ama markhaatiga. Halkii, Ciise wuxuu sharaxayaa xaqiiqada iyo runta ereyga Ilaah ee salaadda ducadiisa-wadahadal la leh aabihii jannada. Wax kastoo naqdiyayaal Kitaabka Qudduuska ah, kuwa diinta masiixiga ah, mujtamaca ka soo horjeeda diinta Masiixiga ah ama dadka ka soo horjeeda maadiga ah waxay ka soo horjeedaan Kitaabka Qudduuska ah ka hor intaanan xaqiiqada Ilaahi ahayn. Wax kasta oo ay ku bixin karaan caddayn ahaan, been abuur ama waxyaalahan ayaa laga tirtiri doonaa markhaatiga Wiilka Aabbaha: Warkan waa run!
Xaqiiqada afka Soomaliga ah sidoo kale macneheedu waa "sharciga iyo sax"! Sidaa daraadeed weedhan macneheedu waxa weeyi: Ereyga Eebuhu wuxuu dhigayaa dhammaan sharciyadiisa, xeerarkiisa iyo xitaa mabaadi'da xukunka, iyo sidoo kale nimcada oo dhan, kafaarogudka iyo allabaryada beddelaadda annaga. Qofka ku nool ama ka baxsan sharciga waa kitaab. Laakiin kii haysta oo rumaysta ereyga Ciise ayaa xaqnimo iyo cusboonaysiiya. Ereygiisu waa nolosheena, xooggayaga iyo rajadeena. Addoome kasta oo ka mid ah Rabbiguu heysto founda- ttion adeegyadiisa aan la garanayn falsafada, barnaamijyada xisbiyada ama riyooyin aan runtii ahayn: Xaqiiqada dhabta ah ee ereyga Eebbe; Masiixa waa runta iyo ereyga Aabbaha oo ah wiilka.
● Muujintii 22:18-19 waxay ku siinaysaa digniin culus oo ku habboon maskaxda muslinka ah: waxaan ku digayaa qof kasta oo maqla erayada waxsii sheegista buuggan: Haddii qofku wax ku daro, Ilaah wuxuu ku dari doonaa boogaha lagu tilmaamay buuggan. Oo haddii nin waxgarasho u garsooro, markaas isagu xumaantiisuu ku dhiman doonaa, adoo jooga geedaha nolosha iyo magaalada quduuska ah iyo waxyaalaha kitaabkan ku dhex jira.
Muslimiintu waxay fahmi karaan waxa digniinahani ka dhigan tahay: Haddii aad wax ku dartid ereyga Ilaah, Ilaahay wuxuu ku dari doonaa boogaha ba'an ee ciqaabtaada daa'in. Haddii aad ka qaadato ereyada ama micnaha ereyada ereyga Ilaah, Ilaahay wuu yaraynayaa ama qaadanayaa ducadiisa diyaar u ah samada. Caqabadaha ah ee hanjabaadda rabbaaniintu waa kuwo cad: Yaa noqon kara nacasnimo sida ereyga Ilaahay haddii ciqaabta weligeed iyo faa'iido darro ah ay keeni karto? Waa wax aan laga fekerin in Yuhuudda cabsida leh ay beenin karto Tawreed ama Masiixi dhab ah Injiilka. Haddii uusan rumaysnayn ama ku noolaanin nolol aan cibaado lahayn, isaga maaha mid Yuhuudi ah ama Masiixi ah oo aamminsan, laakiinse wiilka aabahaa oo dhan been ah (Yooxanaa 8:37-45).
Axdiga Cusub iyo Axdiga Cusub waxaad ka heli kartaa Aayado badan oo muujinaya runta iyo xaqiiqada Kitaabka Qudduuska ah. Waa in aynaan akhrin Kitaabka Quduuska ah ee indhaha Masiixiyiinta ah, laakiin sidoo kale waxay bartaan in ay fahmaan sida aayadahani ula hadli karaan Muslimiinta Kitaabka Quduuska ah wuxuu difaacayaa oo xaq u leeyahay. Waa inaynu ku dhaqannaa dhegeysiga codkiisa, si aan u awoodno inaan u sheegno runta Muslimiinta leh jacayl.
AhTirada sii kordhaysa ee Muslimiinta maanta waxay aaminsan tahay sayniska. Waxay ka tagayaan caadooyinka maskaxda ee Qur'aanka. Mararka qaar waa suurtagal in lala hadlo iyaga si caddaalad ah iyo in lagu dhiirigeliyo inay ku fakaraan fekerka muhiimka ah. Waxa loogu yeero "W-quesitty" waxay ku caawin kartaa halkan. Su'aasha ugu horreysa waxay noqoneysaa:
Yaa been abuuray Kitaabka Qudduuska ah? Yuhuudda ama Kiristaanka? Inta badan waxay ku jawaabaan: Yuhuudda! Waxaan ka jawaabi karnaa: Ma u malaynaysaa in Masiixiyiintu ay aamusnaan lahaayeen haddii Yuhuuddu ay beddeleen Tawreed iyo nebiyadii? Xaqiiqada ah in labada bulsho ee kala duwan ee jira waxay ka dhigayaan mid aan suurtagal ahayn in midkoodna uu si qarsoodi ah ama furfuran leh ugu dhejiyo buug kasta Axdiga Hore. Haddii masiixiyiin lagu eedeeyo inay bedeleen Tawxiidka, waxaad ka jawaabi kartaa in Yuhuudda reer miyuusigga ah ay bilaabi doonaan inay dagaal ku qabtaan caalamka oo dhan oo ka soo horjeeda ciddiyadan. Yuhuudda beenta ah waxay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan xitaa Yuhuudda xoriyada ah si ay u ilaaliyaan xaaladda ereyga Eebahood.
Goorma ayay ahayd Tawreed been? Haddii ay ka jawaabaan "horta" Muxammad waxa aad weydiisan kartaa sababta Muxammad u sheegey magaca 136 jeer Quraanka, Ibraahim 69 jeer, Shaydaanka 68 jeer (Israel), 47 jeer, Sulaymaan 17 jeer iyo David 16 jeer. Quraanku wuxuu si toos ah iyo si dadbanba u xaqiijinayaa wararka Tawreed iyo waxyi ay u muujiyeen Alle. 15-kii sano ee ugu horreeyey adeegga diinta Muhammad ayaa tixgeliyay Tawreed inuu noqdo runta rabbaaniga ah iyada oo aan su'aal jirin. Si kastaba ha ahaatee kama uusan akhrin karin Cibraaniga waxayna ku tiirsanayeen turjubaan afka ah oo u tarjumay qoraalka Carabiga isaga. Mana ayan ka hadlin qoraalka asalka ah ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin inta badan sheekooyin iyo sharciyo ka yimid Mishna iyo Talmuud.
Haddii Muslimiintu ay sii wadaan in Tawreed lagu been abuuray oo kaliya sanadihii la soo dhaafay ee Muhammad ee Madiina, waad ka shakin kartaa in Kitaabka Qudduuska ah horay loogu turjumay luqado badan: Giriig, Laatiin, Ereyga, Suuriya, Chalde an, Coptic, Abyssinian iyo luqado kale. Xaggaas waxaa ku jiray boqollaal, haddii aanay kumannaan ahayn, qoraallada gacantooda qora. Yaa ku soo ururin lahaa dhammaan buugyadaas dhammaan tarjumaadahaan si ay u bedelaan erayada qaarkood boggaga qaarkood? Maadaama Kitaabka Qudduuska ah uu si ballaaran u faafay wakhtigii Muhammad ahaa waxay ahayd mid aan suurtagal ahayn in la been abuuro qoraalka!
Waa maxay cutubyada Kitaabka Quduuska ah lagu been abuuray? Muslimiintu ma yaqaaniin jawaab ku filan su'aashaas! Badankood ma ogaadaan waxa ku jira Tawreed. Sidaa darteed waxaan tusi karnaa inaan weli haysan nuqul ka mid ah Kitaabka Qudduuska ah oo diyaar u ah inuu si taxadar leh u eego qoraallada cusub ee la helay ee Muslimiinta. Ilaa intaa ka dib, waxa aan xaq u leenahay inaan ku adkeyno in Kitaabkeenu yahay mid dhab ah. Ma aha anaga, eedeymaha, in aan caddeyno runta iyo ansaxnimadiisa, maya, waxaa loogu talagalay eedeeysanaha, muslimiinta si ay u cadeeyaan kuwa soo horjeeda - oo aanay awoodin. Ilaa ay keeni karaan Kitaabka ugu fiican, waxaan ku siin karnaa nuqulka qoraalka ugu fiican ee la keydiyay.
Mr. Deedat wuxuu isku dayaa in uu ka boodo Kitaabka Qudduuska ah isagoo gacan ka helaya doodaha burburinta ah ee ay bixiyeen muwaadiniinta Yurub laga soo bilaabo qarnigii 19aad. Laakiin inta badan doodadiisu waxay ka soo baxday sayniska. Si kastaba ha ahaatee waa lagama maarmaanka u ah dadka reer Muslimiinta ah in ay akhriyaan buugaagta Deedat iyo jawaabaha garsooraha Masiixiga, Mr Gilchrist, oo ah qareen ku sugan Koonfur Afrika, si ay u awoodaan inay siiyaan jawaabo ku haboon oo wax ku ool ah.
Qaar ka mid ah dadka bartay Muslimiintu waxay tilmaamayaan qoraallada kala duwan ee ku sugan Axdiga Cusub ee Giriigga, oo muujinaya farqiga u dhexeeya qoraallada asalka ah. Waxay si ula kac ah u isticmaalaan kala duwanaanshahan si ay hoos ugu dhigaan eedeymaha. Laakiin dhab ahaantii calaamadaha badani waxay muujinayaan xaqiiqada, kalsoonida iyo cidhib-tirka jiilalka cilmi-baarayaasha, fiqhiyaadka iyo kuwa yaryar ee aan samaynin qoraalka caadiga ah, laakiin, run ahaantii, waxay sii wadeen inay ilaaliyaan xitaa dif murgacasho. Ma jirto buug kale oo dunida ka mid ah oo la caddeeyey sida Axdiga Cusub oo leh in ka badan 1500 oo qoraal ah.
Iyada oo Quraanka la eegayo xaaladdu waa ta soo horjeeda dhabta ah! Markii Muxammad u dhintay waxaa jirey qiyaastii daraasad oo kala duwan oo ah Qur'aanka kariimka ah oo muujiyay qaabab aan caqli-gal ahayn, sidaa darteed doodaha iyo muranku waxay ku bilaabmeen arimaha khatarta. Caliph Uthman Sidaa darteed wuxuu amray Zaid b. Thabit si aad u akhrido Qur'aan nambar ah iyo in la helo dhammaan asalka dhabta ah la gubay!! Muslimiinta maantaba mar dambe nuqul ka mid ah nuqul ka mid ah Quraanka Quraanka kariimka ah, kaliya nuqullada Quraanka Quraanka Uthman. Shiikhiyiintu waxay si joogta ah u codsadeen - qaar ka mid ahna waxay sameeyaan illaa iyo maanta - in Quraanka Uthman la been abuuray oo la kharribay.
Ishacyaah wuxuu ku yaal Qumran
Qormooyinka Qumran, oo laga helay Baadiyaha oo u dhow Badda Dhimashada, ayaa si gaar ah muhiim ugu ah qadarinta qoraallada kitaabiga ah. Waxaa ka mid ah buug aad u fiican oo lagu ilaaliyo Ishacyaah. Cilmi-baadhayaashu waxay falanqeeyay buuggan oo waxay ogaadeen in laga yaabo in ay taariikhda laga soo bilaabo sannadihii 150aad ilaa 100 ka hor Masiixa. Ilaa ilaa laga soo koobay buuggaan, qoraalkii ugu da'da yaraa ee Tawreed wuxuu ahaa kaliya laga bilaabo sannadka 875 A.D.
Ka dib markii la ogaado Ishacya ee ku yaala Qumran waxaa si lama filaan ah loo ogaan karaa in qaladaadku ay fursad u heleen mudo 1000 sano ah koobiyeyn, ama haddii la isku dayey in la isku dayey. Muddada su'aashu waxay ku jirtaa xataa xitaa nolosha Muxammad iyo jinsiga Islaamka, si ay eedeymaha loo soo jeediyo waxay ku jawaabi karaan gabagabada.
Maqaalku wuxuu sameeyay dhowr qalad markii la daabacay buuggii Ishacyaah. Khalad kasta waxaa lagu calaamadeeyey waraaqda saddexda dhibcood ee ku yaal waraaqda gaarka ah. Warqadda saxda ah ayaa la qoray. Ma jirin wax ereyga lagu tirtiro. Wax kasta oo indhaha oo dhan indhaha ku arkaan. Dhammaadka dhamaystirka saxda ah dhammaan xarfaha buuggan oo dhan ee asalka ah iyo nuqulkii ayaa loo tiriyey sida badanaa loo baahan yahay illaa iyo inta wax laga bedelayo! Ishacyaah wuxuu ka soo duubay godadka ku yaal Qumran, wuxuu awood u yeelan karaa qof kasta oo Muslim ah inuu jecel yahay runta.
Dhammaan wadahadalada ku saabsan xaqiiqada Kitaabka Quduuska ah waxaa lagama maarmaan ah in la iloobo in Qur'aanka aan sheegin in Injiilka uu been abuuray. Muhammad ayaa sharfay Chris Henrik wuxuuna ogaa in aysan been sheegin ama u ciyaarin isaga. Si kastaba ha ahaatee, dooddan waa in ay ahaato mid xeeladaysan, oo laga yaabo in ay tahay su'aasha, si aanay u ceeboobin Muslimiinta.
Bilowgii, Muhammad ayaa muujiyay ixtiraam sarreeya Yuhuudda iyo Kiristaanka sababtoo ah waxay haystaan buugaag quduus ah. Waxa uu aqbalay markhaatiintooda afka, oo lagu turjumay luqadda Carabiga, waxaana lagu daray Quraanka. Aasaasaha Islaamku marna ma helin fursad uu ku akhriyo Tawxiidka iyo Injiilka ee uu ku hadlayo afkiisa hooyadiis, maxaa yeelay buuggaani weli lama turjumin Carabi. Kaliya kadib markii Muhammad uu sameeyey diin diimeed ee Medina oo la filayo in uu ogaado, heshiis iyo soo gudbinta Yuhuudda iyo Masiixiyiinta, wuxuu bilaabay weerarradiisa afka ah ee iyaga ka dhanka ah, sababtoo ah waxay doonayeen inay kala tagaan. Maxaa yeelay, iyagu ma ay garanaynin inuu nebi yahay, oo markaasuu la diriray oo Baabuloon u kaxaystay iyagii. Masiixiyiintu si fiican ayaa loo daaweeyay bilawgii sababtoo ah Abyssinians waxay magangelyo u siiyeen Muslimiinta inta lagu jiro cadaadiskooda.
Laga soo bilaabo xilligii Muhammad uu isku dayay inuu ku guuleysto Yuhuudda iyo Masiixiyiinta Islaamka, waxaa jira aayado badan oo wanaagsan oo Quraanka, oo loo adeegsan karo in lagu muujiyo muslimiinta Muhaam qudhiisu uu xaqiijiyay bani-aadamnimada Kitaabka Qudduuska ah.
● Waxaan soo helnay dhowr ka mid ah aayadahaas Sura al-Maida. Dadka Yuhuudda ah ee Medina waxay ku dhaleeceen Muhammad, duqa magaalada iyo garsoorka ugu sarreeya ee magaalada, si ay u xukumaan kiis adag oo ka dhex dhaca bulshadooda. Laakiin Muxammad, oo aan akhrin karin naftiisa, wuxuu dareemay dabin u eg inuu jilicsanaa ama jaahil yahay oo uu u muujiyo aargoosiga qabiilka (Sura al-Ma'ida 5:42). Sidaas darteed wuxuu kiiska ku soo celiyay hoggaamiyayaasha Yuhuudda, sababo xiiso leh iyo sababo muhiim ah (Sura al-Ma'ida 5:43-45):
43 Sidee bay kugula macaamiloonayaan xukunka iyaga u gaar ah, haddii ay tuhunsan yihiin Tawreed oo ah xukunka Alle? Iyo (haddii aad ku xukuntay) waxay ku noqonayaan gadaashooda. Dadkani waa kuwa aan rumaysadka lahayn.
44 Waxaan ka yeellay Tuurid (dhexdiisa). Dhexdeeda waana ku gargaaraynaa. Nabiyoow kuwa Rumeeyey ee Hijrooday ee ku Jahaaday Jidka Eebe iyo khayrka, iyo Rafiiqa aad ka helaysaan. Waxay ahaayeen markhaatiyaal. Ha ka baqin dadka oo way iga baqayaan! Ha iibin alaabtayda (= aayadaha) qadar yar. Ruuxii ku dagaalama Jidka Eebe wax caddayn Nabi Ibraahim, saasaana ku Abaal marinaa samafalayaasha.
45 Inaan ku Faraxsanno Dhexdeeda Nuurku ku Caga Magaca Eebe Naxariis Badan oo Gaalooba Cabbid iyo Risqi Wanaagsan, iliga, iyo boogaha (sida). Laakiin qofkasta oo aan wax ku darsadey (halkii uu ka noqon lahaa ciqaabtan ciqaabeed) markaa waa ujir u ah isaga. Ruuxii ku dagaalama Jidka Eebe oo la Dilo Dadka si Baadil ah,
Aayaddan muhiimka ah ayaa ah sababta ay Yuhuuddu ugu qasban tahay inaan lagu qasbin in ay noqdaan muslimiin ku sugan dawlad Islaami ah! Waxaa loo oggol yahay inay xukumaan arimahoodu iyaga u gaar ah sida uu dhigayo sharcigooda sharciga ah. Sababta ugu muhiimsan ee mabaadiida sharciga ah waxaa laga helaa markhaatiga Muhammad, oo qiray in aayaddan Quraanka in waqtigiisa uu sharcigii Axdiga Hore ee Tawreed uu si buuxda u jiray. Waxa uu sidoo kale caddeeyay in ay jiraan hage sharci iyo nacal iftiin leh oo ku sugan Tawreed, iyo sidoo kale xukun ku saabsan sharciga iyo xigmadda, hanuun iyo naxariis. Aayadaha Quraanku waxay tilmaamayaan in Alle u hogaamiyo dadka Yuhuudda xaqa ah, oo iyaguna ma kharribayaan. Waxay mudnaan u leeyihiin oo ay si wanaagsan u doortaan doorashooyinka wanaagsan ee Alle, maadaama ay haystaan buugga uu Ilaahay u waxyooday. Maxay markaa Muslimiintu u sheeganayaan in Tawreed lagu been abuuray?
● Waxaa la midka ah ka reebista diinta Islaamka waa sharci ahaan la siiyay Nasaarada:
46 Waxaana Raacsiinay Raadkoodii ciise Ibnu Maryama, waxaana u dardaarnay kuwii la siiyey Kitaabka ee waxay odhanayeen, waxayna dheheen kuway la wadaajiyeen (Eebe) an naga nama aydaan Caabudayn. Oo waxaynu ku guulaysanay rumaysadka inoogu yimaado. Waxaa idiinku Sugnaaday (hadiyada) Nuur aan ku Gaddarayno Dhexdeeda wuxuu ka heli Dhammaantood Korkooda iyo Tawreed wuxuuna Celin
47 Ee ah kuwa Ooga Salaadda oo Guta Zayd kuna soo Gaadhay Guryo oo ku Sugan Calaamad Badal (Janno). Kuwa aan xukumin waxa Alle u sameeyey si ay u jeedsadaan, kuwaasi waa kuwa dambiilayaasha nijaasta ah (Sura al-Ma'ida 5:46-47).
Masiixiyiintu ku nool yihiin wadamada Islaamka waa in ay bartaan labadan aayood ee wadnaha ah, waayo waxay ku jiraan xuquuqdooda ay u leeyihiin inay Masiixiyiin yihiin. Midkoodna sharci ahaan laguma qasbi karo inuu noqdo Muslim.
Sababtoo ah xaqiiqadan waa mid ka mid ah in Eebe u soo diray 'Ciise inuu xaqiijiyo xaqiiqada Tawreed inuu yahay masuuliyadiisii ugu muhiimsanaa (Matayos 5:17-18). Aayaddani waxa ay sidoo kale muujinaysaa in Quraanka injiilka loo tixgelinayo in uu yahay ilaah Ilaahi ah, oo ah dhiirranaan xagga ereyga ah oo ay ku jirto hanuunin iyo iftiin. Intaa waxaa dheer, waxaan akhrineynaa in Injiilka Masiixa uu baray sidoo kale wuxuu xaqiijinayaa Tawreed laftiisa. Tani laba jeer oo caddaynaysa sharafnimada Tawreedka ee Ciise iyo Injiilkiisa ayaa si buuxda loogu aqoonsaday wakhtigii Muhammad oo weli waa! Sidaa darteed arrimahaan hadalka ah ee Allah ee Quraanka ayaa ka aamusi kara Muslimiinta oo ku eedeeyay Masiixiyiin in ay been abuureen injiilka.
Muxammad ha u sheego tilmaam gaar ah iyo deeqda uu Masiixa u fidiyay dadka raacsan. Waxaa laga yaabaa in uu ku soo celiyay buugga sare ee Buurta (Matayos 5-7), oo Muhammadna aan awoodin inuu wax akhriyo, sababtoo ah ma aysan ku noqonin Carabi. Intaa waxaa dheer, Muxammad wuxuu wax qori waayey bilowgii hawlaha diineed (Sura al-A'raf 7:158-159).
Laga soo bilaabo xaqiiqooyinkan iyo khudbaddan qeexan ee Allah Muxammad wuxuu soo saaray natiijo sharci ah, Ilaahayna wuxuu amar ku bixiyaa in waligiis uu leeyahay Injiilku waa inuu ku noolaado buuggan. Qofkasta oo Masiixi ah oo aan ku noolayn sida ku sugan Injiilka ayaa loo tixgeliyaa dembi.
Masiixiyiin ku jira aayaddan quruxda badani waxa loogu yeeraa dadka Injiilka sababtoo ah waxay badanaa ka soo xigsadeen kana hadlayaan Injiilka iyo Muxammad, waxayna isku dayeen inay ku dhaqmaan. Magaca sharafku wuxuu u muuqanayaa kaliya Sura, sidaas awgeedna wuxuu qeexayaa Kiristaanka "socodka Injiilka".
● Isla sidaas oo kale (5:48) Muxammad ha u sheego aayad gaar ah:
48 Annagaa kugu soodajinay Kitaabka (Quraanka) si Xaq ah, isagoo u Rumcyn wixii ka Horeeyey oo Kitaab ah. ¬ dhaafka. ....
Muslimiintu waxay aaminsan yihiin in uu jiro buug asal ah oo jannada ah, oo ah hooyada dhammaan buugaagta rabbaaniga ah, taas oo nebiyadii oo dhan ay soo saartay boggaga qaar. Aayaddani Muxammad ha u sheego in Quraanka uu xaqiijinayo Tawxiidka iyo Injiilka wakhtiga Muhaamam, iyo in isagu, Alle qudhiisa, uu daawanayo eraygiisa aan cidna beenin karin. Haddii Alle ha la seexday markii Yuhuuddii iyo Kiristaanka ay beeniyeen Kitaabka Qudduuska ah, sida Muslimiinta qaarkood sheeganayaan? Ilaahay wuxuu cadeeyaa qof kasta oo beenaale ah oo ka baqaya shaki.
● Sla sidaas oo kale (5:68) Muxammad wuxuu u muuqdaa inuu yahay "wacdiyayaal". Waxa uu ahaa cadho markii uu arkay in Yuhuudda iyo Masiixiyiintu aysan rumaysan isaga iyo qaar ka mid ah aanay ku noolayn sida amarrada buugaagtooda:
68 Waxaad Dhahdaa Qoomkannow miyeydaan Jeelayn kuwii idin Dulmiyey (Xaqa) oo Tuuri Shaydaankuiyo Markay ku Dhecaysaan Gaaladii idinkoo u marag Furi.
Aayaddan Mucjisada ah waxay ku adkeeyeen Yuhuudda iyo Kiristaanka inay barato Tawxiidka iyo Injiilka iyo inay ku noolaadaan si degdeg ah, si ay u qorsheeyaan oo u xukumaan si sax ah iyada oo la raacayo. Muxammad wakhtigaasi waxa uu rumaysan yahay in dhammaan buugaagta jannada ay ka yimaadeen ilo isku mid ah isla markaana ay dhamaysteen hal mar. Uma maleyneynin in Tawreed ama Injiilka lagu khiyaaneeyo; halkii, wuxuu amar ku bixiyay dadka buugga si ay u fuliyaan nolol maalmeedkooda.
Arjiga Carabiga ah ee Jordan ayaa isticmaalay aayaddan, wuxuu qaaday Kitaabka Quduuska ah ee gacanta midigta kiciyey, waxaana loo yaqaanay, kor iyo hoos u dhexeeya tareenka la xajiyey ee xajka ee Mecca on platform ah ee Ma'an, "Waxaad tahay waxba maahan ilaa aad Tawxid iyo Injirta! "Wacdiyuhu wuxuu ka saaray erayada oxing iyo jumladkii ugu dambeeyay wuxuuna ku casumay dhammaan Muslimiinta inay ka iibsadaan Biblo. Qofna kuma soo weeraro sababtoo ah wuxuu ku celcelinay aayadda rabbaaniga ah ee Quraanka!
● In Quraanka waxaa jira laba calaamadood oo kale oo muhiim ah, laakiin kuwan waa in aan loo isticmaalin marar badan. In Sura Yunis 10:94 Eebe wuxuu amrayaa Muhammad:
94 Markaad Shukrdaan (Quraanka) Dhib Baa oo Bixiya Zakada oo ka Sekira Aayaadkanaga Dhamaan.
Muxammad wuxuu baaray xaqiiqooyinka kitaabiga ah ee ka yimid Yuhuudda iyo Masiixiyiinta, farriimaha afka ah ee uu xusuusto, waxay ku afduubeen Carabi fiican waxayna ku shaaciyeen mararka qaarkood waqtigoodii weerarrada suuxdinta. Mararka qaarkood waxa uu shaaca ka qaaday waxa uu maqlay laakiin mar dambe ma xasuusan karo macnaha ereyada iyo jumladaha ku lug leh. Isagu ma helin wax kale oo ka duwan sidii uu Ilaahay ugu amri lahaa inuu ku waydiiyo kuwii isaga u sheegay aayaddan Kitaabka Qudduuska ah, waxa muujiyay inuu ujeedada dhabta ah u jeedo. Sidee Muslimiintu u sheegan karaan in Rashii lagu been abuuray, haddii Alle Quraanka ku amray Muxammad inuu ku laabto Yuhuudda iyo Masiixiyiinta inay Quraanka u sharxi karaan, maxaa yeelay, waxay kitaabkii ka akhriyeen hortiisa? Waa in aynaan sharaxin nuxurka aayaddan ujeedada muslimiinta, laakiin waydiiso macnaha ay u leedahay illaa ay aqoonsadaan oo qiraan waxa ay tahay xaqiiqda dhabta ah.
● Ee Sura al-Nahl 16:43 jumlad la mid ah ayaa lagu soo jeediyay dhamaan Muslimiinta. Alle waxa uu u malaynayaa in ay Muhaamma:
43 Mana aadan ahayn hortaal kuwa ka Marag kaca ah (Quraanka). Ee iskaga jeedso (Dadka) Dhibaato (Dhaqaaleeyey) idinkoon ogayn.
Muxammad wuxuu ku dhiirri-galiyay Muslimiinta in ay u tagaan Yuhuudda iyo Chrisland marka ay shaki ka qabaan jumlada Qur'aanka, si ay uga codsadaan Alle iyo amaradiisa. Laakiin Muxammad ma u dirin qof Masiixi ah ama Yuhuudi ah, laakiin keliya kuwa ku tilmaamaya qoraalka muujinta Tawreed iyo Injiilka ereyga erayada iyo wadnaha.
Qof kasta oo doonaya inuu ka dhex shaqeeyo muslimiinta addoon u ah Rabbiga waa inuu bartaa munaasabadaha muhiimka ah ee Kitaabka Quduuska ah ee wadankooda wadnaha, oo ay ku jiraan tirada cutubyada iyo aayaadka. Muhammad qudhiisa u diray Muslimiinta kaliya ee kuwa akhrin kara erayga Ilaah oo aan lahayn buug gacmahooda ah.
● Waxaa jira aayado badan oo ku sugan Quraanka oo xaqiijinaya macnaha Kitaabka Quduuska ah. Waxaan rabnaa in aan soo qaadno kaliya hal xigasho ee Aayadaha Eebe ee Quraanka:
27 Markaas, waxaannu u dirnay raadkoodii, oo waxaannu u dirnay 'Ciise, ina Maryan, waxaannu ka samaynay Injil (Injiilka) si uu ugu yimaado, oo waxaannu galnay qalbiyadii kuwii raacay isaga -xumo iyo naxariis (Sura al-Hadid 57:27).
Muxammad marar badan ayuu marag furay in Masiixiyiintu ay yihiin saaxiibka ugu badan ee ka soo horjeeda muslimiinta, maxaa yeelay waxay u heelan yihiin naxariis iyo naxariis. Dhibaatadaas oo ah Muhammeemku waxay ku soo noqotaa wakhtigii uu si xun u silcin jiray Maka. Wuxuu ugu baaqay 83 Muslimiin in ay u cararaan Itoobiya si ay magangalyo u raadsadaan. Iyagu ma ay shaqeynin, laakiin waxay heleen gargaar iyo xorriyad. Muxammad wuxuu isku waydiistay sida ay taasi suuragal u tahay. Waxa uu ogaaday in Allaah uu ku dhiiri geliyay 'Ios iyo Gosplatos oo naxariistiisa, jacaylka iyo naxariistiisa uga soo baxay Injiilkan qalbiyada kuwa raacay Masiixa si daacad ah.
Muxammad wuxuu aqoonsaday wax aan caadi ahayn ee Masiixiyiinta ah, laakiin ma fahmi karno taas oo isbeddel ku samaysay dadka iyo dadka ku caawiya xitaa macmiilkooda. Jawaabtu waxay ku qoran tahay Rooma 5:5b, meeshii Bawlos ku yiri: Ilaah wuxuu jacaylkiisa ku shubay qalbigayaga by Ruuxa Quduuska ah, oo la siiyay. Muxammad ma uu ogeyn xaqiiqada Ruuxa Quduuska ah, laakiin wuxuu arkay midhihiisa macaamiisha Ciise Masiix.
Aayaddani waxa ay tilmaamaysaa habka ugu wanaagsan ee lagu sharxi karo Muslimiinta in Kitaabka Quduuska ah uusan ahayn musuqmaasuq. Nidaamka ugu wax ku oolka ahi waa wax aan ahayn jacayl iyo naxariis xitaa cadaawayaasha iskutallaabta. Nolosheena, ducooyin, markhaatiyaal iyo adeegyo aan u noqon karno musuqmaasuqa muslimiinta in ay aqoonsadaan in Kitaabka Qudduuska ahi yahay mid dhab ah oo awood leh. Qof kasta oo naga mid ah ayaa masuuliyad weyn leh.
● Butros ayaa qirtay oo yidhi, Sayidow, yaannu u tagnaa? Adigu waxaad leedahay erayada nolosha weligeed ah. Waannu rumaysan nahay oo garanaynaa inaad tahay Kan Quduuska ah ee Ilaah (Yooxanaa 6:69, Matayos 16:16). Later, Butros wuxuu xoojiyay markhaatiga warqaddiisii ugu horeysay: Waxaad mar kale ku dhalatay, ma ahan mid aad u liidata, laakiin waa mid aan fiicnayn, iyada oo loo marayo ereyga nolosha iyo dulqaadka Ilaah (1 Butros 1:23; 5).
● Yacquub walaalkii Ciise, ayaa xaqiijiyay khibraddan, qoraal: Wuxuu doortay inuu na siiyo dhalashada ereyga runta ah, in laga yaabo in aan noqonno mid ka mid ah midhaha ugu horreeya ee uu sameeyay (Yacquub 1:18).
● Yooxanaa waa kiniisadda ugu wada yeedhaysa, tan iyo bilowgii, oo aynu maqalnay, oo aannu indhahayaga ku aragnay, oo aannu eegnay, oo ay gacmahayagu taabteen oo Ereyga nolosha ah. ... Waxaan idiin soo bandhignaa wixii aan arkeynay iyo maqalnay, si aad nala wadaagto. Is weheshiina waxay la joogaan Aabbaha iyo Wiilkiisa, Ciise Masiix (1 Yooxanaa 1:1-3).
● Paul wuxuu jarayaa dhammaan hubin la'aanta ah isagoo leh: Anigu kama xishoodo injiilka Masiixa, maxaa yeelay waa awoodda Ilaah ee badbaadinta qof kasta oo rumaysta (Roahmans 1:16).
● Qoraal ka mid ah warqaddii Cibraaniyada wuxuu inoo sheegayaa: Ereyga Ilaah wuu nool yahay oo firfircoon. Sharxaa ka badan seef kasta oo douxar-edged, waxay u galaan xitaa si ay u qaybiyaan nafta iyo ruuxa, kala-goysyada iyo dhuuxa; waxa ay xukuntay fikradaha iyo qaladka wadnaha (Cibraaniyada 4:12).
Laga bilaabo 2000 oo taariikhda kaniisadda waxaan ka akhrisanay tijaabooyin badan oo rag iyo dumar ah oo ogaa in erayada Ciise ay yihiin ruuxa iyo nolosha, buuxa awood, run iyo xigmad. Pastor Wilhelm Busch oo ka soo jeeda Essen ee Jarmalka ayaa ku booriyay dadka kaniisadaha ah inta lagu guda jiro habeenkii qarxinta dagaalkii labaad ee adduunka: "Marka ay dhacdo in aad qayliso oo aad ku dhex gasho hoyga hawada ee saldhigga ah waxa ugu muhiimsan maaha in lala qaato Lacagtaada ama buugga jeegga, laakiin Kitaabka Quduuska ah ", waayo aadanuhu keligiis kuma noolaan karo, laakiin erey kasta oo ka timaada afka Ilaah (Matayos 4:4; Luukos 4:4).
Khudbadda heesaha barbaarinta iyo heeso soo jeedinta ayaa ah jawaabta rumaystayaasha ah ee Ilaah, marka uu iyaga u hadlayo. Waxay isaga ammaanaan sida Aabbohooda, dembiyadooda u qiraan isaga, helid cafiska iyo awoodda Ruuxiisa, taas oo xoojinaysa naxariista iyo jacaylka noloshooda. Waxay sidoo kale maqlaan baaqa ah in la keeno ereyga nololeed ee Ilaah u muujiyay quruumaha oo dhan, waayo Injiilka waa in lagu wacdiyaa dhammaan dadka ka hor intuusan iman Ciise.
Martin Luther ayaa heestay:
Rabbiyow, na sii inaad amarradayda dhawrtid,
Xakamee kuwa ku filan farsamo ama seef
Boqortooyadaadu way ka adkaan doontaa wiilkaaga
Oo wuxuu sameeyey wax aan waxba tarayn.
Kaniisadda Leipzig waxay heesteen 1597:
Eraygaagu run buu ahaa,
waanad adkaysan doontaa,
Ballankiina wuxuu u taagan yahay si hubaal ahIn nolosha,
iyo markii aan dhimanaya.Adigu Rabbiyow,
adigu waxaad tahay ilaahayga.
Ii dhawra sida aad Thine,
Dhamaan awoodda loo baahanyahay.
3.08 -- B A A R I S
Haddii aad si taxadar leh u baratay buug-yarahan, si fudud ayaad uga jawaabi kartaa su'aalaha soo socda. Qof kasta oo ka jawaabaya 90% dhammaan su'aalaha ku jira siddeed buug oo taxanahan ah, si sax ah ayuu u heli karaa shahaadada xarunteena
Muxuu yahay dabeecadda cakiran ee Muslimiinta ugu badan ee runta ah ee Kitaabka Qudduuska ah? Muxuu aragtidaasi u diiddanaa qaar badan oo ka mid ah inay ku kalsoonaadaan qoraalka Tawxiidka iyo Injiilka?
Dhibaatada sharciga ah ee lagu hayo Yuhuudda ee ku yaala Madiina markay isku dayeen inay qariyaan sharciyo gaar ah oo Tawxiid ah oo ka yimid Muxammad, garsooraha magaaladooda?
Midkee ka mid ah tobanka xadgudub ee Qur'aanka ku saabsan ee ku saabsan Tawreed ayaa u muuqda inuu yahay kan ugu khatarsan?
Halkee ayuu Qur'aanka ku andacoodaa in dhammaan Yuhuudda adduunku ay isku raaceen in ay baddalaan Qoraallada Qoraallada Quduuska ah?
Halkee ayay ku tiraahdaa Tawreed dhamaystiran ayaa la tashaday?
Muxuu Quraanka ka hadlayaa khaladaadka Injiilka?
Sidee baad u caddayn kartaa muslinka ah sida uu sheegayo sida Muuse "Sharciga Kunoqoshadiisa 18:15-18 maaha Muhamma?
Maxay ballanqaadka Ciise u noqon kartaa imaatinka la-taliyaha (parakletos) oo aan loo arki karin sidii markii la soo gaadhay soo socda ee Muxammad?
Maxay culimada Muslimku ogaadeen marka ay si taxadar leh u barbar-dhigeen Qur'aanka Kitaabka Qudduuska ah? Sidee ay isku dayeen in ay xalliyaan iskahorimaadka aan kala sooc lahayn ee u dhexeeya labadan buug?
Maxay yihiin qaababka sumcad darada ah ee Mr. Dedat iyo sababta uu u adkeyn lahaa iimaanka Masiixiyiinta xitaa firfircoon ee Asia iyo Afrika? U sharax dhibaatada ku jirta dib-u-dajinta Masiixa ka dib markii lagu aasay "saddex maalmood iyo saddex habeen"!
Waa maxay shanta meelood ee aad isticmaali karto si aad ugu sharaxdo muslinka aan qoraalka ahayn ee dhammaan buugaagta Kitaabka Qudduuska ah?
Sidee buu Rabbigu naftiisa u hubsaday Yeremyaah oo ku saabsanaa runta aan badnayn iyo saxnaanta eraygiisa?
Maxaan ka baran karnaa Sharciga Kunoqoshadiisa 4:2 iyo Maahmaahyadii 30:5-6 marka ay difaacayaan runta iyo bani'aadamka?
Aayadahee Axdigii Hore u muujiyay in kitaabkan Quduuska ah uu naftiisa difaaco runta aan la isku beddelin ee muujinta Ilaah ee ku jirta?
Sidee ballanqaadka Rabbiga ee Ishacyaah 55:10-11 ugu farxi karaa qof kasta oo aamin ah oo Muslimiinta ah?
Maxay tahay sababta Masiixiyiin kasta oo ula macaamilaya Muslimiinta ay bartaan bayaankii Ciise ee ku jira Matayos 5:17-18 wadnaha?
Siduu Ciise kuugu ballanqaaday ansaxnimada weligeed ah ee eraygiisa?
Maxaynu ka ogaan karnaa runta ku sugan injiilka ka soo bixinta dhakhtarka Giriigga ee Luukos injiilka?
Maxay macnaheedu noqon kartaa muslimiin in Ciise lagu magacaabo "Ereyga Ilaah" ee jidhka labadaba Injiilka Yooxanaa iyo Quraanka?
Sababta Ruuxa xaqiiqda ah ee naga mid ah iyo sidoo kale Muslimiinta? Maxay tahay sababta Ruuxa runta ah ee jira ee Islaamka jira? Maxay tahay natiijada xaqiiqda dhabta ah ee adeegyadaada Muslimiinta?
Maxay tukashadiisu ugu qanacsan tahay inuu Ciise jacaylkiisa u muujiyo Aabbaha jannada ku jira: "Eraygaagu waa run"? Waa maxay macnaha ereyadani micnaheedu?
Muxuu Muujintii 22:18-19 ugu caddayn karaa qofkasta oo Muslim ah oo furfuran?
Sidee su'aasha ah, "yaa beddelay Tawxiidka?" Ka caawi inaad u muujiso muslimiinta in qofna uusan been sheegi karin Kitaabka Qudduuska ah?
Sidee ayuu su'aashu u noqon karaa, "Goorma ayaad u malaynaysaa in Tawxiidku bedelay?" kaa caawiya inaad u hoggaansamaan muslimiinta si ay u helaan
Maxay 1500 qoraallo qadiimi ah ee qaybaha kala duwan ee Kitaabka Qudduuska ah looma wada midoobin ama xitaa la burburiyay? Maxay ahayd sababta asal ahaantii Qur'aanka gubtay?
Maxay noqon kartaa doodaha ugu muhiimsan ee Ishacyaah ee lagu qoray Qumran?
Maxay yihiin xuquuqda gaarka ah ee Yuhuudda ku nool dawlad Islaami ah sida uu qabo Sura al-Maida 5:43-45? Sidee Muhammad u xaqiijiyay waxyiga ilaahay iyo suubanaanta Tawxiidka ee aayadahan?
Sidee aayadaha gaarka ah ee Sura al-Ma'ida 5:46-47 waxay u dammaanad qaadayaan dhammaan Masiixiyiintu inay xaq u leeyihiin inay Masiixiyiin sii ahaadaan haddii ay ku nool yihiin bulsho diimeed? Maxay tahay sababta qof kasta oo Chrisnexan ah ee ku dhex nool Muslimiintu ay baranayaan aayadahan oo ay ku garanayaan wadnaha? Sharax faahfaahinta labadan aayadood ee Quraanka!
Siduu Muxammad u dalbaday in Qur'aanku uu xaqiijiyo Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub? Sidee Ilaahay Islaamku u ilaaliyaa waxyigiisa? (fiiri Sura al-Ma'ida 5:48)
Muxuu Muxammad u dhowaa inuu noqdo wacdiye diidmo ah oo ka yimaada Yuhuudda iyo Masiixiyiinta si ay ugu noolaadaan sida buugaagtooda? Muxuu wicitaankiisu u jeedaa bani-aadamka aan bini-aadamka ahayn? (eeg Sura al-Ma'ida 5:68)
Muxuu ahaa Muhammad si uu u waydiiyo macnaha Quraanka kariimka ah mar kasta oo uusan fahmin wixii isaga lagu soo dejiyey? (fiiri Sura Yunus 10:94)
Muxuu yahay Muslimiinta loola jeedaa mar kasta oo ay u baahan yihiin caawimaad si ay u fahmaan Quraankooda? (eeg Sura al-Nahl 16:43)
Maxay tahay caddaynta caddaynta bani-aadamka iyo awoodda Kitaabka Qudduuska ah? (eeg Sura al-Hadid 57:27)
Aayaddee ka mid ah marqaatiyada Rasuullada Masiixu si cad u muujinayaan in Kitaabka Quduuska ah uu yahay erayga Ilaah ee aan badelayn?
Muxuu Rasuulka Bawlos u sheegay in Injiilka Masiixu uu ku jiro awood buuxda oo Ilaah? (eeg Rooma 1:16)
Miyuu Rabbiga noloshiisa si toos ah ugula hadlay ereyga uu daabacay Kitaabka Qudduuska ah? Haddii ay kugu haboon tahay, fadlan qor noo soo koobid wixii uu kugu yiri.
Qof kasta oo ka mid ah kalfadhigan ayaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta oo qormooyinkiisa ah iyo inuu weydiiyo qof kasta oo aamin ah oo loo yaqaan isaga oo ka jawaabaya su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga qoran oo ay ku jiraan cinwaankaaga oo buuxa waraaqaha ama emailkaaga. Waxaannu kuu baryaynaa Ciise, Rabbiga nool, inuu u yeedho, u iftiimiyo, diro, hagto, xoojiyo, ilaaliyo, iyo inuu kula joogo maalin kasta noloshaada!
Page last modified on March 24, 2020, at 12:50 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)